Enid Blyton. Reissues nenharo? | Zvazvino Zvinyorwa
Enid Blyton. Reissues nenharo?
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vechidiki Mabhuku
Ichi chinyorwa hachisi chazvino nekuti Reissues yeEnid Blyton's Classics anga ari muzvitoro zvemabhuku kwechinguva. Kutanga kwaive kwekutanga mavhoriyamu maviri mavhoriyumu ezvikoro zvine mukurumbira zvevacheche boarding evasikana vazhinji seni: Malory Towers y Santa Clara. Zvino edhisheni nyowani dzeaya maunganidzwa uyezve e Vashanu.
Ini ndinochengeta angangoita mana kana mashanu mabhuku e VashanuMumwe wavo ari mumufananidzo, uye ndakave nerombo rakanaka kuti makore mashoma apfuura vakandipa iwo mavhoriyamu maviri andataura. Ndakavadya mune rimwe zhizha, kusvika makumi mana emakore. Panguva yaitaurwa nezvayo kuchinjika kwemavara ake kune itsva nyowani dzezvematongerwo enyika dzanhasi. Vakatanga kuzviita vaive veBritish, hongu. Asi yakanga isiri nguva refu yapfuura iyo pandakaverenga ichi chinyorwa. Uye zvakadaro ...
Ndinoedza kunetseka nezvezvakanaka uye zvishoma (nyaya yemusimboti uye mimwe mikoko yandinotambura) pandinoona mazwi ekuti "kururamisa" uye "zvematongerwo enyika" mumutsara mumwe chete. Kana, pamusoro pezvo, iko kururamisa kuri mitauro, nyora "mhinduro dzemudzimba", iyo urticaria inonditungamira kune allergies emadhigirii akasiyana. Saka Ini ndinochenjerera pamberi pe chero mhando yepirouette kana mitauro yekugadzira ndizvo zvandiri.
Ndakaverenga Blyton -kana maTintin ma comics (ayo akazviwisirawo ake nguva yapfuura) - apo isu tanga tisina kunyatsoita uye mutauro wanga usiri chimbo chezvematongerwo enyika sezvazviri ikozvino. Ndakaiverenga semusikana mumakore makumi manomwe nemakumi masere, kubva kuguta reLa Mancha uye kubva kuchikoro chemasisita. Uye muLa Mancha tiri vanhuwo zvavo, senge terroir.
Bhuku rechina mune akateedzana Santa Clara
Saka pamakore mapfumbamwe, gumi kana gumi nerimwe, zvine musoro mumwe anoverenga pasina imwe nzira kunze kwekushandisa (kana kwete) nguva yakanaka nekuverenga ikoko. Y Ndakanga ndine nguva dzakanakisisa nemakeke echingwa chegingerbread, mafambiro emanheru, iyo lacrosse uye chiuru nechimwe nyonganiso, misikanzwa nemanomano zvakaitwa nevasikana veChirungu veSanta Clara naTorres de Malory. Uye ini ndakahwanda mumapako ese ndikatsvaga zvakavanzika zvese zveKirrin zvinoperekedza Jorge, hama dzake uye imbwa yavo Tim pazviitiko zvavo.
Ini ndichawedzera izvozvo Ndakafara zvakafanana naRichmal Crompton's William Brown, mumwe wepanguva yeBritish Blyton. Ndakagara nhaka bhuku rake raive kubva kuna baba vangu uye rakandifadza. Gare gare vakandipa yakawanda. Ini ndinofungidzira kuti ikozvino Guillermo Brown ndiye mwana asiriye wezvematongerwo enyika anogona kuvapo.
Zvisinei, chokwadi ndechekuti munhu anokura, ramba uchiverenga uye anodzidza kuti misogyny kana rusaruro rwakawanda mumabhuku aBlyton. Kunze kwezvo, hunhu hwake hwekunyora hwaive nekusahadzika uye ndosaka akaonekwa semunyori wechipiri. Iye aivewo akazvarwa muzana ramakore regumi nemapfumbamwe muGreat Britain yehumambo nemakoloni pano nepapo. Akafa muma60, chaizvo kure nepfungwa uye chiono chitsva chemafungiro azvino.
Mune mamwe mazwi, zvakare zvakare, gakava risingaperi rinoshanda kune chero munyori ane, ngatitii, rimwe gwapa pafaira rake rinoenderera Maitiro aya nemaitiro ekutaura nyaya akakanganisa mundangariro dzevana nevechidiki kuti tinoiverenga ipapo? Ini ndinogona chete kuzvipindurira ndega: hapana zano. Iwe unogona kuzviita nekusaziva here? Zvichida, asi zvinoratidzika kwandiri kuti kwete sevaverengi, asi sevanhu, isu tiri chigadzirwa cheizvo zvatinoverenga, kurarama nekuona kunze kwekudzidza kwedu uye nharaunda.
Mamwe emabhuku angu kubva paudiki hwangu uye ndisati ndakura
Ndakaverengawo mabhuku aBlyton ivo vachiri kutengesa zvakanaka, nekuti zvese zvakasikwa uye dhizaini zvine hurongwa. Chimiro chayo ndechekare uye kukosha kwayo hakuna kuchinja, kunyange zvakaitwa zvinodaidzwa nevamwe kuti «kugadziriswa», vamwe «kuchekerera» uye vamwe «kudzvanya». Ini ndinongozvibvunza iyi mibvunzo:
Kuti ndainakidzwa nenyaya dzavo? Hapana mubvunzo. Chii chinogona kuvandudza kuverenga kwangu? Zvakare. Kuti ini ndaive nedambudziko rekunzwisiswa kana kududzirwa pfungwa. Zvakanaka kwete. Kuti ini nguva pfupi yadarika ndakaona izvi zvekunyora uye zvega kushaya simba kwemunyori uyu? Zvimwe.
Ndakaverenga nyaya dze Lane, ivo Andersen kana avo e Grimm hama, izvo nekudzvinyirira zvakangofanana nekukambaira. Muenzaniso wekuenzanisira: amai vangu, mudzidzisi wepuraimari, panguva yekudya kwemasikati vaiisa pane redhiyo kaseti iwo matepi anoshamisa enhau dzedrama dzaiwanikwa. Mumwe wavo aive Ndebvu BhuruunaPerrault. Mutambo uyu wainakidza, uine vatambi vakanaka uye mimhanzi inotyisa. Nhasi ndaizopa chero chinhu kuti ndimuwane kunze uko zvakare.
Asi ini handisi mudiki kana kunyanya kutya nazvo. Kana ini handifunge kuti, panguva ino mufirimu rangu, ndichave psychopath kana chidhakwa mutikitivha (Inspector Hole, anogara ari wake ...) nekuti ndinofarira zvemhando nhema. Saka ini ndinopedza neyakareruka: mamiriro ezvinhu aunofanirwa kuisa zvese. Hupenyu hwatove hwakajeka zvakakwana mumutauro, chokwadi uye mifananidzo. Chinokosha kuverenga, chero uye chero chii, asi verenga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Vechidiki Mabhuku » Enid Blyton. Reissues nenharo?
Dita Delafeather. akadaro
Ndakaverengawo Iyo Shanu uye Santa Clara, uye ichokwadi kuti verenga nhasi, vanogona kukuya mune chimwe chinhu kana chimwe, sezvazviri nhasi isu tavhunduka kuti ma comics akagadzirwa nemuvhimi wemhuka achiperekedzwa nemunhu mutema ane diction matambudziko ( Ini ndinotaura nezvaEustaquio Morcillón), kana kuti Captain Thunder akauraya maMoor, kana kuti muna Tom Sawyer vakabuda vatema sevaranda. Uye izvo? Nhoroondo haigone kuchinjwa, uye inoverengeka yakanaka, kana kuvaraidza, haizoregi kuva zvakadaro nekuti, kutyisa kwezvinotyisa, zvinoratidza chokwadi chezvemagariro chenguva yaive yakanyorwa. Kwandiri, havafanire kubata. Kana, saamaiguru, ndikaona kuti zvimwe zvinoverengwa nevanin'ina vangu zvinoda kutarisirwa, ndiri pano kuzovaudza «Prima, Secunda, Tertia ... kunyangwe iwe ukaona kuti mune ino comic / ino ino / ino bhaisikopo vanoita zvakadaro chinhu, usatombofunga nezvazvo kuti uzviitire izvi, zveizvi neizvo. Uye wakagadzirira.
(Uye handina kuseka zvishoma naGuillermo murume akaipa ... heck mwana, dutu reCaribbean parutivi rwake, ingava mhepo yezhizha).
Pindura Dita Delapluma.
Ndichiri kurangarira "masangweji" akatorwa neVANHORI zvekudya. Kunaka kwakawanda sei kwandakafungidzira, nepfungwa dzangu dzeSpanish, mune iwo masangweji ...
Masangweji iwayo ainaka. Ah zvangu, ichokwadi. Sandwiches. Vashanduri vacho vanga vasati vaisa "sangweji."
MAERERANO NEDITA KANA ZANA Mazana PANE ZANA
kubvumirana zvachose, ini ndaivewo fan weVashanu, zvakare fan of Jules Verne. Ndaka "tarirwa" nemutauro "wakakwirisa" akadaro.
Christian perez akadaro
Iwe wakandiyeuchidza nezve nguva yakanaka kwazvo yehudiki hwangu, ikozvino ndiri 35.
Aive mabhuku aive natete vangu ayo anonditorera makore gumi.
Mumwe mubvunzo, unoziva here mamwe manyorerwo eiyi dhayera aive nemusikana aive nemask uye kape kapfupi? Ndine iyo mupfungwa dzangu, uye mashoma ekutsvagisa ndinoita, zvese asi izvo zvinoonekwa kwandiri.
Pindura kuna Christian Perez
Fantomette kana ndisina kukanganisa 😛
Ndatenda, João. Chokwadi, chinyorwa chinonakidza kwazvo.
Kubvumirana zvachose, Mariola. Ini ndinongo rangarira chinhu chimwe kubva pandakaverenga Iwo Mashanu, uye kunyanya wangu anodikanwa Hollister na Andrew E. Svenson: kuti ini ndainakidzwa kunge diki uye kuti iwo mapeji akavhura chiuru mikova kune wangu mukuru kuverenga panguva imwechete iyo yavaive vachigadzira nheyo.
Maitiro andaifarira kupinda kwako, zvakandiita kuti ndive nostalgic. Ndatenda.
Ndatenda. Kufara kukuita iwe nostalgic, lysergic, simba kana kusanzwisisika. Chii chandichaudza iwe chausiri kuziva?
Kubva ndichiri mudiki ndakaverenga aya mabhuku anotaurwa nemunyori, nekuda kwekuti hanzvadzi yangu huru akaidya uye akandikurudzira kuti ndiaverenge. Ndakave naSanta Clara, Malory, ivo vashanu, uye Puck mumaoko angu.
Zvepabonde mutauro muLos Cinco? Ana aive "mukadzi" chaizvo mune yechinyakare pfungwa uye pamwe ainyara, asi Jorgina (Jorge, urombo) aive akasiyana, uye hama dzake dzaimuremekedza nekumukoshesa "kusanzwisisika." Vabereki vake vaifungidzira nemaonero akakosha aJorge, asi ivo vakaratidzirwa savakadaro. Muchokwadi, hungwaru hwaAna hwakanga husina kunyatsoshatirwa, zvichiramba zvichikurudzirwa kuwedzera kushinga uye kushinga.
Taura zvakare kuti ndakaverenga zvakare Malory; unogona kusvira bhuku rega rega mune isingasviki awa, chokwadi ndechekuti ipfupi. Ini ndinogona kutaura kuti ini handina kuona imwechete inonamira mutsara. Vasikana vanokurudzirwa kuve vakangwara, vakashinga uye vanozvivimba, kure nemhando yechinyakare.
Dzimwe nguva ndinonzwa kuti tiri kuitora nepepa remudzanga.
Pindura kuna M. Rubio
Kuongorora kukuru zvaunoita. Uye hazvisi kuti isu tine manzwiro, ndezvekuti tanga tichizvitora nepepa remudzanga kwenguva yakareba.
Ruth dutruel akadaro
Kwete chete nekuverenga izvo zvinonzi zvekare tinogadzira zvinyorwa zvedu zvekunyora.
Pindura kuna Ruth Dutruel
Ndiri kufara zvese nemutsa wako uye neuyo wemuverengi anotevera uyo anondipawo chinongedzo. Kufara hauzive kusvika papi. Ndinokutendai kubva pasi pemoyo wangu kuti mandidzosera chimedu chehudiki hwangu zvinoreva zvakawanda kwandiri. Ndingadai ndisina kutanga zuva zvirinani. Uye kubva pano kukukoka iwe kune chero zvazvinotora pane iyi huru dudziro. Ndatenda ndatenda ndatenda.
Iyi yaive Beard yangu yeBlue yaityisa.
Ndichaona kana ndichigona kuwana zvimwe.
Luis, maita basa kwazvo. Ini ndinoreva kumhinduro yandakapa Danieri pakutanga. Ndiri kufara kwazvo uye ndatozviteerera kaviri. Inokosha ichi rwendo munguva ...
Bhuku rakafemera mhondi nhatu uye "rakapedza" hupenyu hwaLennon
Librotea, iyo chaiyo chikuva chevaverengi nevatengesi vemabhuku